PEN South Africa : Isishwankathelo PEN International
PEN South Africa : Isishwankathelo
Home Page > PEN South Africa : Isishwankathelo
Kwilizwe elineelwimi ezixananazileyo nezahlukileyo, kwakunye nangenxa yomonakalo omkhulu owenziwa lucalucalulo kwakunye nenkqubo yokwenziwa kweli lizwe isithanga, kube kuncinci kakhulu okwenziweyo ngelitheresi kunye noluncwadi kwiilwimi zesiNtu. Umgaqo-siseko waseMzantsi Afrika ugunyazisa kwaye uqinisekisa ngokupheleleyo imfundo apho ukufunda nokufundisa kusekelwe kulwimi lwebele kwaye kusenziwa ngeelwimi ezimbini nangaphezulu, kodwa ukunqaba kwemithombo nezinye izinto zokufunda ezikumgangatho onguwo zabantwana abancinane abahlala eMzantsi Afrika nabantetho yabo ingesosiNgesi, yinto eyongeza kuluhlu lwezizathu ezibangela ukuba oku kuthi gqolo ukungaphumeleli ukuza kuthi ga namhlanje – kwakunye nenqanaba elisezantsi ngokumangalisayo lempumelelo lokufunda kwinyambalala yabafundi.
Iprojekthi ye-PEN South Africa iqhutywa ngentsebenziswano kunye no-PRAESA, novelisa isiqulatho sokufundwayo esenziwe ngeelwimi ezininzi nesiqinisekisa ukuba ukuphuhliswa kwephulo lokufundela ukuzonwabisa lukaNal’ibali lokufunda nokubhala nelikumgangatho ophezulu naxa nje liqhutywa ngendlela apha ukufunda nokufundisa kungaqhele kwenziwa ngayo. Le projekthi yenguqulelo-zilwimi inceda ekuphembeleleni nasekugcineni abantwana befunda iincwadi ezikumgangatho ophezulu ngeelwimi zabo zeenkobe. Unal’ibali uxhasa ukufunda phakathi kwabadala nabancinci kwaye ukhankathela nokuqhutywa kweeklabhu zokufunda ngabantu abadala kwiindawo zoluntu, esikolweni nakumathala eencwadi kuwo onke la maphondo mathandathu eMzantsi Afrika.
Ukuza kuthi ga ngoku yimijikelo emibini yezinto zokufunda nokubhala esele yenziwe. Owokuqala umjikelo ibingowochungechunge lwamakhadi amabali nathe aguqulelwa kwiilwimi ngeelwimi zaseMzantsi Afrika, ashicilelwa ze asasazwa kwiiklabhu zokufunda. Owesibini umjikelo ibingowokuguqulelwa esiXhoseni nasesiZulwini uGeorge’s Secret Key to the Universe obhalwe nguLucy Hawking kunye noStephen Hawking. Kulindeleke ukuba le ncwadi iprintwe ngowama-2016, izifundo kule ncwadi zicwangciswe ngamalungu e-PEN SA nezizicatshulwa kwincwadi yabantwana, eziya kurekhodishwa ze kwabelwane ngazo ukuze kuxhaswe kwaye kukhuthazwe ukufundwa kwezinto zokufunda eziphathelelene namabali ezenzululwazi ngeelwimi zesiNtu kunye nesiNgesi.
Kananjalo le projekthi ivumela i-PEN South Afrika ukuba isebenzisane kunye nomzi wopapasho wakweli, iJacana Media, nto leyo eyenza ukuba i-PEN SA isebenzise oko kuveliswa yimizi yopapasho eMzantsi Afrika ekuphuhliseni iincwadi zabantwana ezibhalelwe abathengi abatsha ngeelwimi zesiNtu.
Ngokuxhasa uguqulelo lwamabali kwezinye iilwimi, ukuveliswa kwawo nokusetyenziswa kwawo, i-PEN ayiphembeleli nje kuphela uphuhliso lokuveliswa nokubandakanywa kweencwadi ezibhalwe ngeelwimi zesiNtu ngabapapashi, koko ihlahla indlela: eya kuvumela abantwana ukuba bafunde izinto zokufunda eziza kuvuselela izakhono zabo zemifanekiso-ntelekelelo, ubugcisa nobuqili babo; indlela eya kwenza ukuba kuhlangane ihlabathi loluncwadi lwabantwana kunye neloluncwadi lwabantu abadala; indlela eya kwenza ukuba kugxilwe kwingxoxo ngeencwadi ezifanele ukuba zifundwa ngabantwana; indlela eya kuphembelela iingcingane malunga neendlela uququlelo kwezinye iilwimi ‘olulunge’ ngayo kwanokuba yinto efanele ukuba iyenziwa kusini na.